मोरक्को मा डाइभ गर्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरू Absolut यात्रा
मारुउजेन | | मोरक्को
उत्तर अफ्रिका हो मोरक्को, एक सुन्दर र प्राचीन देश जुन एट्लान्टिक महासागर र भूमध्यसागरको दुबै किनारमा बग्दछ। जिब्राल्टरको प्रसिद्ध स्ट्रेटले यसलाई युरोपबाट अलग गर्दछ र यसको निकट स्थान र यसको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सौन्दर्यहरूको कारण यसले धेरै पर्यटन प्राप्त गर्दछ।
तर के तपाईंलाई त्यो थाहा थियो? मोरक्कोमा गोता लगाउन ठाउँहरू छन्? यो सहि छ, यसको विश्व धरोहर साइटहरु बाहेक, यसको उत्सवहरु र यसको ग्यास्ट्रोनोमी, मोरोक्कोले इमान्दारताका साथ डुबा र स्नोर्कलको लागि केहि स्थानहरु लाई सुरक्षित राख्दछ। आज हामी तिनीहरूलाई भेट्नेछौं।
2 मोरक्को मा डाइभिंग
3 जहाँ मोरोक्को मा डुबाउने
हामीले भनेझैं, यो देश हो उत्तर अफ्रीका, एक सार्वभौम देश हो जसको स्पेन र फ्रान्ससँग जोडिएको लामो औपनिवेशिक इतिहास छ। यी जग्गाहरू प्रागैतिहासिक कालदेखि नै बसोबास गर्दै आएका छन्, यति धेरै संस्कृतिहरू यहाँ हुँदै आएका छन्।
इस्लाम सातौं शताब्दीको अन्तमा आइपुग्यो र यसको हातबाट शहरहरू जति सुन्दर थिए फेज, माराकेच, रबत र मेक्नेस। यसको भूगोलको सन्दर्भमा मोरक्कोसँग पहाडी दायराहरू र मैदानहरू छन् र मजा लिन्छ भूमध्य जलवायु यसको तट रेखा र अधिक महाद्वीपीय अन्तर्देशीय मा।
यो समुद्री तटमा ठीक छ जहाँ गोता लगाउन ठाउँहरू।
मोरक्को मा डाइभिंग
डाइभिंग र मोरक्को प्राय: समान वाक्यमा मेल खाँदैन। कसैले यो देशको बारेमा सोच्दछ र मरुभूमि, ऊँट, कारभान, सफारी, बजारहरू धेरै बिक्रेताहरू र त्यस्ता परिदृश्यहरूको कल्पना गर्दछ। त्यसो भए, के तपाई साँच्चिकै डुबुल्की मार्न सक्नुहुन्छ? हो।
यसको सबै सांस्कृतिक सम्पत्तिले यसको समुद्री किनारको सुन्दरतालाई कभर गर्दछ, र त्यहाँ युरोपियनहरूको कुनै कमी हुँदैन उनीहरू सोच्दछन् कि मोरोक्कोमा डाइवि prohib निषेध गर्नुपर्दछ, तर यो त्यस्तो छैन। यो पनि होइन कि एकले कहिँ पनि डुबुल्की लगाउन सक्छ, त्यसैले तपाईले उच्च अपेक्षासहित स्वतन्त्र रूपमा जानुपर्दैन।
मोरक्कोमा त्यहाँ केही डाइभ केन्द्रहरू छन् र तिनीहरू हातमा यति नजिक छैनन्। त्यसोभए, यदि तपाईं डाइवि inमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले कहाँ पत्ता लगाउनु पर्छ कहाँ जानुपर्दछ र सिधा डाइभ सेन्टर तर्फ जानुहोस्। यो होइन कि तपाइँ संयोगले यी साइटहरूमा ठेस लाग्दै हुनुहुन्छ।
मोरक्को फ्लोरिडा जस्तै नै अक्षांशमा छ, तर यसको पानी धेरै चिसो छयद्यपि करन्टहरू नरम छन् र सामान्य रूपमा समुद्र शान्त छ। उसले हिसाब गर्दछ कि मध्य मोरक्कोको तापक्रम पानीको बारेमा कुरा गर्दै जाडोमा १º डिग्री सेन्टिग्रेड र गर्मीमा २º डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ।
समुद्री जीवनको हिसाबले, मोरक्कोमा डाइभिंगको एक फाइदाहरू यो हुन् त्यहाँ वन्यजन्तुहरूको एक धेरै छ। वास्तवमा यो विश्वमा केहि ठाउँहरू मध्ये एक हो जहाँ समुद्रमा डल्फिनको साथ पौडी खेल्नु वैधानिक छ। त्यसोभए, त्यहाँ डाइभि agencies एजेन्सीहरू छन् जसले डु ride्गाको सवारीलाई डल्फिन हेर्ने र एक अर्कासँग अलि पौडी खेल्ने गरी संयोजन गर्दछ। तपाईं पनि देख्न सक्नुहुन्छ समुद्री कछुवा र यदि तपाईं चट्टानमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ छ ट्युनस, ईल्स, ग्रुपर्स र समुद्री मेशिन।
मोरक्कोमा डाइभिंगको बारेमा उत्तम कुरा ठीक त्यस्तै हो सामान्यतया डाइभिivingको लागि यो नक्सा बाहिर छ, त्यसोभए यहाँ जो आउँछ उसले धेरै मानिससँग नहुनु ठूलो फाइदा हुन्छ। डाइभि when गर्ने बेला राम्रो चीज भनेको भीडको अघि पुग्नु हो ताकि माछालाई टाढा नदेऊ र यहाँ मोरोक्कोमा सजिलो छ। यद्यपि यो डाइभिंग र स्नोर्कलिंगको आश्चर्य पनि होइन त्यसोभए यदि तपाइँ उच्च अपेक्षाहरूसँग जानुभयो भने तपाइँ निराश हुनुहुनेछ।
जहाँ मोरोक्को मा डुबाउने
एजाडिर मोरोक्कोमा गोता लगाउन यो राम्रो ठाउँ हो। यो एक शहर हो जो सूस-मसा क्षेत्रको राजधानी हो र एट्लान्टिक महासागरमा तटवर्ती छ। यो रबतको 600०० किलोमिटर दक्षिण र क्यासाब्लान्काबाट 440० किलोमिटर टाढा छ।
अगादीर १ founded औं शताब्दीमा पोर्तुगालीहरूले स्थापना गरेका थिए र १ 1960 in० मा यसले ठूलो भूकम्प गयो। योसँग धेरै रिच कल्चर छ त्यसैले तपाईं सबैलाई समान यात्रामा समेट्न सक्नुहुन्छ। तपाई एउटा भाडामा लिन सक्नुहुन्छ Minute 45 मिनेट डाइभ यात्रा।
पानी तातो छ, यद्यपि दृश्यता आश्वस्त हुँदैन। साइन अप गर्नु भन्दा पहिले मौसमको स्थिति जाँच गर्नु उत्तम हुन्छ। अगादीरमा डाइभिंग डु boat्गा सवारीको साथ मिल्दछ र तिनीहरू सामान्यतया बिहान :9: around० बजेतिर होटल पिक-अपको साथ सुरू हुन्छन्।
कार यात्राले हाइकर्सलाई शहरको मरीनामा लैजान्छ जहाँ डु wa्गा पर्खन्छ र आधा घण्टासम्म यात्रा गरे पछि तिनीहरू चयनित स्थानमा पुग्छन् जहाँ तिनीहरू 453मिनेट बस्छन्। भ्रमणले पेय र खाजा समावेश गर्दछ र यदि तपाइँ केहि माछा मार्ने कर पकड्न को लागी। तपाईं दिउँसो XNUMX बजेतिर होटल फर्किनुहुन्छ। भ्रमण भाँडामा लिन कम्तिमा एउटा जोडी हुनुपर्दछ।
मोरक्कोको अर्को गोताखोरी देशको दक्षिणमा डाखला हो।
यो शहर सहाराको पश्चिममा छ र आज यो मोरक्कोले ओगटेको छ। मा निर्भर गर्दछ एट्लान्टिक तटमा साँघुरो प्रायद्वीपरियो दे ओरो प्रायद्वीप। यी मुलुकहरू बर्बरहरूले लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका थिए तर यो बस्ती स्पेनीको हातबाट बढेको थियो जुन नजिकैका क्यानरीहरूबाट मछुवाहरू थिए।
आज डाखला माछा मार्ने र पर्यटनबाट बाँचिरहेका छन् र एक समयको लागि यो अंश छ मोरक्को मा पानी खेल मक्का, धेरै लोकप्रिय हुनु विन्डसर्फि,, कइटसर्फिंग र सर्फ गर्दै। र धेरै कम हदसम्म, the डाइभिंग। तैपनि, त्यहाँ ती मानिसहरू छन् जो सोच्छन् कि यो समुद्री किनार रिसोर्ट बुसोहरूको लागि थोरै स्वर्ग हो किनकि यसको नुनको पानी ताल धेरै ठूलो छ। दाखलामा तपाई भित्र-भित्र वा समुद्रमा यसको पानीमुनि सुन्दर र यसको दृश्यहरू हेर्न रोमांचकारी गर्न सक्नुहुन्छ माछा को अविश्वसनीय मात्रा।
Essaouira यो एक बन्दरगाह शहर हो र धेरै पर्यटकीय पनि एट्लान्टिक तटको साथ छ। आराममा बे बन्द भयोयोसँग एक सुन्दर पुरानो शहर छ, पर्खालहरूले समुद्रमा हेरेको छ, र यो सुन्दर छ। यो सबै चीज र यसको समुद्र तट, व्यापार वायु द्वारा caresed, जस्तो कि खेल को लागी एक महान गन्तव्य हो काइटसर्फि,, विन्डसर्फि sur र सर्फ गर्दै। मूल रूपमा Dakla मा जस्तै, र यो यहाँ पनि जोड्दछ डाइभि, यद्यपि यो दस पोइन्ट होइन।
सच्चाइ यो हो पानी केही अप्ठ्यारो छतिनीहरू केहि दिन धेरै सफा हुँदैनन्, त्यसैले जब यो सूचीबद्ध छ त्यहाँ धेरै नकारात्मक समीक्षा छन्। अहिले सम्म हामीले मोरोक्कोमा अटलान्टिक पानीमा डुब्ने बारेमा कुरा गरिसकेका छौं तर भूमध्यसागरको पानीको बारेमा के भनौं? भूमध्यसागरको किनार पनि राम्रो छैन, त्यहाँ धेरै माछाहरू छैनन् र कोही भन्छन कि कहिलेकाँही र केहि स्थानहरूमा यो ढलमा डुब्ने जस्तो छ। के यो यस्तै हो?
सत्य यो हो कि एस्साइरा शहर एक ठूलो ठाउँ हो, त्यहाँ धेरै राम्रा मानिसहरू, राम्रो खाना र शहरमा जीवनको एक धेरै ठाउँ छ, तर समुद्र तटमा थोरै। माथि उल्लिखित खेलहरू भन्दा पर, जो कि अत्यन्तै लोकप्रिय छैन या त, यो भन्न गाह्रो छ कि यहाँ डाइभिंग यसको लायक छ। तटको बाहिरी भागमा त्यहाँ केही टापुहरू छन् तर तिनीहरू स्नोर्कलिंग वा डाइभिंगको लागि राम्रो गन्तव्यहरू छैनन् किनकि। समुद्र अलि कठिन हुन सक्छ, एट्लान्टिक बतासको कारण।
वास्तवमा, यो याद राख्नुहोस् कि एस्साउरा एकदम चल्ती शहर हो र त्यो लामो प्यान्ट र केही न्यानो चीज तपाईको सुटकेसमा जहिले पनि हुन्छ। तर हे, मूल रूपमा यो पानीमा हुनुको बारे हो र यसको मुनि होईन ...
अन्तमा मोरक्कोमा डुबुल्की मार्नका लागि तपाईले त्यो पनि जान्नुपर्दछ डाइभिंग मौसम सबै वर्ष हो किनभने मौसम सबै मौसममा आदर्श हो। हामीले माथि भनेझैं, जनवरीदेखि मार्चको महिनाहरूमा यो १º डिग्री सेन्टिग्रेड र जुलाई र सेप्टेम्बर बीच हो, २ººC। पानी भित्र वा बाहिर हुनु खराब छैन।
त्यो पनि थाहा छ त्यहाँ धेरै एजेन्सीहरू छैनन् र त्यो राम्रो छ किनभने डाइभ साइटहरूमा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छैनन् र तपाइँ जहिले पनि एक पेशेवरको साथ हुनुहुन्छ। यो मामूली तथ्य होइन, पानी बगिरहेको छ त्यसैले उनीहरूलाई के भइरहेको छ थाहा हुने कोहीसँग बस्न सुविधाजनक हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » मोरोक्कोमा गोता लगाउन उत्तम ठाउँहरू
गोताखोर गर्न मलाई सबैभन्दा मन परेको डाखला निस्सन्देह, मोरक्कोको दक्षिणी भागमा, एउटा प्रमोदवन, सुन्दर थियो।
के तपाई मलाई स्थान को बारे मा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ ... राम्रो डाइभिंग छ? म मे २०१ May मा जान चाहन्छु र म धेरै डाटा फेला पार्न सक्दिन ... धेरै धेरै धन्यबाद
मारिन गार्सिया ट्यूटर भन्यो
के तपाई मलाई दजलामा केही मेलो डाइभिंग केन्द्रहरू बताउन सक्नुहुन्छ? म इन्टरनेट मा केहि प्राप्त छैन
मारिन गार्सिया ट्यूटरलाई जवाफ दिनुहोस्